DAAWO : Muuqaalka Al-Shabaab oo dhagax ku diilaya haweeneey lagu eedeeyey arin layaab leh | Dayniile.com
DAAWO : Muuqaalka Al-Shabaab oo dhagax ku diilaya haweeneey lagu eedeeyey arin layaab leh
Oct. 27 WARKA MAANTA, XULKA WARARKA Comments Off on DAAWO : Muuqaalka Al-Shabaab oo dhagax ku diilaya haweeneey lagu eedeeyey arin layaab leh
Xarakada Al-Shabaab oo xukul dil dhagax ah ku fuliyey Haweeneey Soomaaliyeed oo ay ku sheegeen in iyadoo xaas ah guursatay nin kale kadib markii uu soo dacweeyey seygeedii hore oo ay mudo wada noolaayeen.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in seyga qabay Xabiibo Cali Isxaaq oo lagu magacaabo Cali Ibrahim Cali uu dacwadaan soo gudbiyay.
Xukunkaan rijmiga ah o ka dhacay degmada Saakow ee gobolka Jubadda Dhexe ayaa qaadiga Shabaabka uu sheegay in baaris ay sameeyeen iyo xiriiro kala duwan inay u xaqiiqsadeen in Xabiibo Cali Isxaaq ay ku dhacday fal sinne ah, ayna mudeysatay sida shareecadda qabto xukun rijmi ah oo dhagax in lagu dilo ah.
Sheikh Mohamed Abu Abdalla oo ah amiirka Shabaab ee gobolada Jubbooyinka ayaa sidoo kale, xukunkaan xaqiijiyay, iyadoo Kooxo afka soo duubtay ay dhagxaan waaweyn la dhaceen marxuumad Xabiibo Cali Isxaaq, iyadoo aysan jirin cid u dooday ama garsoor xaq ah.
Ninka ilmaha ay u dhashay ee Cali Ibraahim ayaa ku dooday in xaaskiisa ay sineysatay, kana raacday wiil dhalinyaro ah, isagoo sheegay in ay markii ay baxaysay fasax ugu qaadatay qaraabo salaan, laakiin ay guursatay nin ay balansanayeen.
← VIDEO : Daawo 7 Arimood oo uu Sirdoonka Soomaaliya kaga wanaagsanyahay kuwa caalamka & Caqabadaha heysto
VIDEO : Daawo 7 Arimood oo uu Sirdoonka Soomaaliya kaga wanaagsanyahay kuwa caalamka & Caqabadaha heysto →